Zimbabwe country code, Zimbabwe area code, calling Zimbabwe, Zimbabwe dialing code
- Country code of Zimbabwe :
Zimbabwe : How to call Zimbabwe ?
This page is specially dedicated to Zimbabwe international dialing codes.
02) dial Zimbabwe country Code
Example : how to call from France to a fixed phone in Zimbabwe : 00 + 263 + xx xx xx xx
Calling Zimbabwe from USA the United States
second, dial Zimbabwe country Code
Example : how to call from US to a fixed phone in Zimbabwe : 011 + 263 + xx xx xx xx
Zimbabwe : How to call USA (United States of America) from Zimbabwe ?
Dial 00 or + the international access code for Zimbabwe
While searching for Zimbabwe Country Code, you may look for a city area code. dialing-area-codes.com provides you the list above named Zimbabwe Cities Area Codes. You can also find below some useful information about Zimbabwe ISO code, Zimbabwe area square (km), Zimbabwe population , and Zimbabwe international code.
Informations about Zimbabwe
Flag of Zimbabwe :
Zimbabwe telephone country code :
00263 ou +263
ISO code Zimbabwe:
Zimbabwe population :
Zimbabwe Area Sq. Km :